Petrus Romanus, 15 Ọgọst 2021 | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 15 Agasti 2021
Petrus Romanus, 15 अगस्त 2021 →
Petrus Romanus, 15 Ọgọst 2021
NWA ANYỊ : “ N’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. ”
WILLIAM : N’azụ Ya puku kwuru puku mmadụ na ọkọlọtọ bụ n’elu isi ha.
NWA ANYỊ : “Ana m ekele gị, nwa m dị oke ọnụ nke Obi m na -adịghị ọcha: n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. ”
“Taa, m na -abịa na otu nde mkpụrụ obi a tọhapụrụ na Gates nke Purgatory , ndị ji gị ụgwọ, Nwa m m hụrụ n’anya.”
WILLIAM : Ha niile gburu ikpere n’ala wee bụọ abụ ekele nye Atọ n’Ime Otu na echiche efu: “Ma gị, ezigbo nwanne anyị, onye zọpụtara anyị n’afọ nke ebere Chineke.”
Nwaanyị anyị na -agwa m okwu wee sị:
LADY anyị : “Achọrọ m ka ị kwadebe onwe gị ugbu a, maka na aga m akpọga gị Purgatory.”
WILLIAM : Ndị mmụọ ozi nke Gates nke Purgatory mepere ya.
NWA ANYỊ : “Ọkpara m hụrụ n’anya, lee mkpụrụ obi ndị a na -eche ka ha banye n’igwe.”
WILLIAM : Enwere ọtụtụ ijeri mkpụrụ obi na -ekpe ekpere na -atụ anya ya. Nne Mary rịọrọ m ka m debe ihe ịrịba ama nke obe n’elu ha, nke m mere. +
NWA ANYỊ : “10,000 ga -aga eluigwe taa. Ha niile bụ ndị kwere na gị, nwa m nwoke. Ha ga -aba n’ime igwe n’ime otu awa. Ka anyị laghachi ebe m nọ, Nwa m. ”
“Taa bụ ụbọchị dị ebube, nwa m, n’ihi na ọtụtụ mkpụrụ obi ga -abanye na eluigwe, ọ dịghịkwa mkpụrụ obi ọ bụla a ga -ama ikpe n’ụbọchị nnukwu oriri m.”
“Nwa m na ụmụ m, taa, anyị na -eme emume mmeri m n’ime eluigwe. N’otu aka ahụ a na m arịọ ụmụ anyị niile ka ha chee echiche banyere oge gị onwe gị ga -abanyekwa na Eluigwe, n’ihi na nke a bụ ebumnuche m chọrọ ka ụmụ anyị niile banye, mana anyị ga -ekpe ekpere maka mkpụrụ obi niile, dịka onye iro siri ike na oge a n’ihi na ọ maara na oge ya ga -agwụ, n’oge adịghị anya. Kpee ekpere, ụmụaka dị ụtọ, Chaplet nke ebere Chineke maka onwe gị na ụmụ nke ụwa. ”
“ New South Wales nke Australia abanyela na mkpọchi niile n’ihi ọrịa na -efe efe , mana ọ bụ mmejọ na -ezighi ezi, n’ihi na ọ ga -ebutere ndị New South Wales nnukwu esemokwu. Ndị ọchịchị na -eleba anya n’okwu ahụ n’oké egwu, mana ndị na -achị achị nwere obi ụtọ dị ukwuu, n’ihi na nke a ga -akpatara ụmụ m nnukwu nchegbu. Kpee ekpere maka ndị isi, n’ihi na ha ga -enwe ọtụtụ ihe ị ga -aza. Umu m, oria ojoo a adighi oke ka unu siri mee. Ekpere ga -edozi nsogbu niile ”
“Ụmụ m m hụrụ n’anya, ụwa gara n’ihu n’ọchịchịrị. Ndị mmadụ na Middle East na -anụ ọkụ n’obi. ọnọdụ ahụ, na -enwe olileanya na America ga -alaghachi ka ọ ghara ịkwapụ ndị Taliban . Mana, ụmụaka na -atọ ụtọ, nke a bụ idobe ihe owuwu America, n’ihi na site n’ịkpọpụ ndị agha America n’ụlọ, ndị America agaghị enwe ike n’ụlọ mgbe mba na -awakpo ala America. ”
“Kpee ekpere, ụmụ m maka America , n’ihi na ọdachi ga -abịa, ọkachasị na steeti California. Ọtụtụ steeti ga -ata ahụhụ, n’ihi na mmadụ ka na -egeghị ọkpụkpọ oku anyị ikpe ekpere na ịkwụghachi ụgwọ. Kpee ekpere maka Britain , n’ihi na nnukwu ọnwụnwa na -abịa n’ihu mba a. ”
“Kpee ekpere maka France , n’ihi na ọ gaghị adị anya mgbe mba a ga -anọchibido. Kpee ekpere maka Eze nke France , n’ihi na oge ya dị nso ịbịa napụta ndị France; na -ekpekwa ekpere maka Peter II, n’ihi na ọkpụkpọ ya ga -abịa n’ụwa n’oge adịghị anya. ”
“N’ụbọchị nnukwu oriri a, m na -enye mkpụrụ obi niile nke ezi onye nsọ, ka o nyere ha aka iru izu oke na ịdị nsọ. Gị, nwa m nwoke dị nsọ, ga -anata ndị mmụọ ozi na ndị nsọ atọ, ka ha nyere gị aka n’okwu gị maka mmezu nke Papacy gị. ”
“A na m agọzi gị na ezi mkpụrụ obi niile, ịgbaso ụzọ nke na -eduga n’Alaeze nke Onye Okike. + Ana m agọzi gị: n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. ”
WILLIAM : Nwanyị nwanyị anyị na Saint Michael na -alaghachi na White Cross na mmụọ ozi nche m ka nọ.
NWA ANYỊ : “Ahụrụ m gị n’anya, nwa m nwoke a gọziri agọzi, William: n’aha nke Nna na nke Ọkpara na nke mmụọ nsọ. Amen. ”
This entry was posted in Igbo and tagged Petrus Romanus. Bookmark the permalink.